Ukhuphiswano loPhuculo lwasekhaya - Okunye
Ukhuphiswano loPhuculo lwasekhaya
Imincintiswano yokuphucula amakhaya iluncedo kubo bobabini abathengi nakwabavelisi. Ukhuphiswano yenye yeendlela abavelisi abatsalela ingqalelo kumgca othile wemveliso, kwaye abaninimzi bavuna umvuzo wentengiso yasimahla kunye nokulungiswa kwakhona.
Ukufumana ukhuphiswano loPhuculo lwasekhaya
Imincintiswano yophuculo lwasekhaya kulula ukuyifumana. Kukho ugxininiso olunje ngoku kwiiprojekthi zenzele ngokwakho,ukulungiswa ngaphakathi, Ukulungiswa komhlaba, kunye nezinye izinto ezijolise ekhaya ezibonisa phantse yonke i-makeover, imagazini, kunye nevenkile yokuphucula ikhaya inika amathuba okuphumelela.
Iinkampani ezininzi zidibana kunye nemiboniso ephuculweyo yokuphucula amakhaya ukubonelela ngezipho ezinkulu.
Umboniso wokulungiswa kwakhona Endlwini kunye nabazalwana abakhathalelayo unephepha lewebhu elikhethekileyo elinikezelwe kumathuba okuphucula amakhaya. Ukunyuswa rhoqo kubandakanya amathuba okuphumelela iingcango ezintsha, iidesika kunye nezinye iiprojekthi zolwakhiwo.
Iwebsite ye Inethiwekhi ye-DIY ineempawu ezahlukeneyo zokuphucula i-sweepstakes. Iigaraji ezintsha, amaziko e-BBQ asemva kwendlu, nokuba likhaya elitsha kraca ngamabhaso ambalwa abonisiweyo. Le nethiwekhi inxulumene namanye amajelo asekhaya, kubandakanya iNethiwekhi yokutya, iHGTV, kunye nokuPhila okuhle. Ukuba ufuna ukuya kwigolide yasekhaya, ngenisa ii-HGTV's Iphupha Ekhaya Sweepstakes .
Ukulungiswa kwekhitshi, akukho ndawo ibhetele yokufumana ukhuphiswano kunokupheka iimagazini. Izixhobo ezingaqhelekanga, iikhabhathi zasekhitshini ezithandekayo, kunye nezinye ii-nooks zokupheka kunye nemibono zihlala zipapashwa, kwaye uninzi lwazo zibhengezo zibandakanya ukunikezela ngentengiso.
Uya kufumana eminye yemincintiswano ebhengezwe kwiiwebhusayithi zamaphephancwadi, nayo. Umzekelo, UkuKhanya kokuKhanya unephepha lokhuphiswano elinikezela ngokhuphiswano olwahlukeneyo, kubandakanya uhambo, izinto zokupheka zasekhitshini, kunye nebhasikithi yesipho sompheki ezaliswe zizinto zokupheka ezintle kunye nezinye izinto.
Amanye amaphephancwadi okuphucula amakhaya afana Amakhaya kunye neeGadi ezingcono baxhasi nokhuphiswano ngokunjalo.
Iiwebhusayithi zeMveliso kunye neMiboniso
Yiya ngqo kumthombo wezinto ezinje ngebhafu eshushu, izixhobo zokuhlambela, imigangatho emitsha okanye ithayile, izixhobo zombane, iingcango kunye nokutshintsha iifestile, kunye nezinye iimfuno zokulungisa.
Umzekelo, i-American Standard's plumbing kunye neendawo zokulungisa iwebhusayithi inikezela ngeendlela zokunyusa, kubandakanya Olona khuphiswano luMbi kakhulu , kunye namaxesha asimahla onokuthi u-odole ukunceda iinzame zakho zokulungisa kwakhona.
Izixhobo zeHardware kunye noPhuculo lweKhaya
Iivenkile ezininzi zisebenzisana nabaxhasi bemincintiswano kunye ne-sweepstakes, okanye ziindawo ezilungileyo zentengiso zonyuselo. Umzekelo, iDepho yaseKhaya ihlala inemixholo eyahlukeneyo kunye nee-sweepstakes eziqhubekayo abazibhengeza kuzo Sweepstakes iphepha.
Izinto ekufuneka uzikhumbule
Iimveliso kunye neenkonzo zinokuba yirhafu ehlawulelwa irhafu. Unokucinga ukuba i-makeover yekhitshi yokuphupha eyi- $ 50,000 iyonwabisa, kodwa inyani kukuba kuya kufuneka uhlawule isithathu saloo mali iphumeleleyo kwirhafu. Vavanya uhlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi ngaphambi kokungenisa ifom yokungenela ukuze uqiniseke ukuba unayo eyaneleyo yokuhlawula iindleko.
Thatha ixesha lokufunda ukuprinta okuhle. Abavelisi benza ukhuphiswano lokuphucula amakhaya ukukhuthaza imveliso okanye inkonzo. Ngelixa ungaphumelela kuyilo kunye nemithi yedesika entsha, izinto eziguqukayo ezinje ngolwakhiwo, ukuthotywa kwenkunkuma, iziganeko zokwakha, njalo njalo kunokuba luxanduva lwakho.
Umda wexesha lakho usenokungabi lixesha lokukhuthaza. Rhoqo, ukhuphiswano luhambelana nokuqaliswa kwemveliso ephambili, ukuvulwa kwevenkile entsha, okanye ukutyhilwa kwewebhusayithi entsha, incwadi, okanye umboniso kamabonwakude. Ukongeza, kuxhomekeke kubume bokhuphiswano, ixesha lokungena linokuhlala ixesha elide njengeenyanga ezili-10, kwaye isibonelelo sokunikezelwa sinokuthatha ukuya komnye unyaka. Ukuba uzama ukuluhluza ikhaya lakho ngaphambi kokuba uthengise okanye utshatele emtshatweni, akunakuba kububulumko ukuthembela kumncintiswano wokufumana umsebenzi.
Lumkela ubuqhetseba. Uninzi lweemincintiswano azifuni ukuba kuthengwe ukungena. Qinisekisa ukuba kukho ikopi epheleleyo yemigaqo ekhoyo kwindawo yokungena. Akunyanzelekanga ukuba ubonelele ngaphezulu kunolwazi lokunxibelelana, isincoko esifutshane, okanye umfanekiso wedijithali wokungena, ke ukuba ukwazisa okupapashiweyo kufuna ulwazi lobunini okanye olungaqhelekanga, hlala kude
Ukuba unomonde, uphonononge imigaqo, kwaye sele uhlahlo-lwabiwo mali lubekelwe bucala, akukho sizathu sokuba ungagcwalisi isiliphu sobhaliso okanye ikhadi lokungena. Amawakawaka abantu aphumelela ukhuphiswano lokuphucula amakhaya- kwaye ungalandela!
Ukufumana amanye amathuba okubona i-sweepstakes yekhaya kunye nezinye izinyuselo ezinengeniso, ndwendwela Sweepstakes Namhlanje.com .
Isondlo Supplements Ezantsi Carb Imovie Iindlela Indawo Yasemsebenzini Ukhuseleko Iindlela Ukukhetha I Camera
umahluko phakathi kwe-feta kunye neeshizi zebhokhwe
Kuthatha ixesha elingakanani ukuhambisa umphunga imifuno
uxelele njani iminyaka yekati
uluhlu lweempahla zabasetyhini kwiivenkile ezikwi-intanethi
uyenza njani imali lei eneedola
Bangaphi abantu abenza ukutya okupheleleyo kwekhekhe eliphepha